Mmadụ anaghị ebite ndụ aka, nsogbu na-ezukwa ya ahụ́ (1)
“Osisi nwedịrị olileanya” (7)
“A sị nnọọ na ị ga-ezo m n’ili” (13)
“Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, ọ̀ ga-adị ndụ ọzọ?” (14)
Ọrụ aka Chineke ga-agụ ya agụụ (15)
14 “Mmadụ nwaanyị mụrụAnaghị ebite ndụ aka,+ nsogbu na-ezukwa ya ahụ́.+ 2 Ọ na-apụta ka okooko osisi, mechaa kpọnwụọ.*+ Ọ na-agafe ọsọ ọsọ ka onyinyo ma pụọ n’anya.+ 3 N’eziokwu, ị nọ na-ele ya anya,Ị na-akpọkwa ya* ka gị na ya kpee ikpe.+ 4 È nwere onye na-adịghị ọcha ga-amụtali onye dị ọcha?+ E nweghị. 5 Ọ bụrụ na e kpebiela ụbọchị ole ọ ga-adị ndụ,Ọnwa ole ọ ga-adị ndụ dị gị n’aka. I kpebiela oge ọ ga-anọru ka ọ ghara ịgafe ya.+ 6 Wepụ anya gị n’ebe ọ nọ ka o zuru ike,Ruo mgbe ụbọchị ya ga-ezu, otú onye ọrụ e goro ego si arụcha ọrụ ya n’ụbọchị.+ 7 N’ihi na osisi nwedịrị olileanya. Ọ bụrụ na e gbutuo ya, ọ ga-epulite ọzọ,Ome ya ka ga na-etokwa. 8 Ọ bụrụ na mgbọrọgwụ ya emee ochie n’ime ala,Ọ bụrụkwa na úkwù ya anwụọ n’ime ájá, 9 Ọ ga-epulite ma mmiri metụ ya. Ọ ga-awakwa alaka ka osisi puru ọhụrụ. 10 Ma mmadụ na-anwụ, tọgbọrọ n’enweghị ike. Mmadụ kubie ume, olee ebe ọ nọ?+ 11 Mmiri na-ata n’oké osimiri,Mmiri na-asọpụcha n’osimiri, osimiri ataa. 12 Mmadụ na-edinakwa ala ma ghara ibili.+ Ọ gaghị ebili ruo mgbe eluigwe na-adịghịzi,A gaghịkwa akpọte ya n’ụra.+ 13 A sị nnọọ na ị ga-ezo m n’ili,*+Na ị ga-ezo m ruo mgbe iwe gị dajụrụ,Na ị ga-ekpebi oge m ga-anọru, gị echeta m.+ 14 Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, ọ̀ ga-adị ndụ ọzọ?+ M ga-echere n’oge niile a manyere m ichere,Ruo mgbe a ga-eme ka m nwere onwe m.+ 15 Ị ga-akpọ òkù, m ga-azakwa gị.+ Agụụ ọrụ aka gị ga na-agụsi gị ike. 16 Ma ka ọ dị ugbu a, ị na-agụ ije ụkwụ m niile ọnụ. Ị na-ele anya ka ị hụ naanị mmehie m. 17 I kechiela ihe ọjọọ m mere n’akpa,I jikwa mgbá nyachie ya ka mmehie m dịrị na ya. 18 Otú ahụ ugwu na-ada, kụrisịa,E bupụkwa oké nkume n’ebe ọ dị, 19 Otú ahụ mmiri na-erichasị nkume,Idei mmiri ebupụkwa ájá dị n’ala,Otú ahụ ka ị na-eme ka olileanya mmadụ efu laa n’iyi. 20 Ị na-emerigide ya ruo mgbe ọ lara n’iyi.+ Ị na-agbanwe otú ọ dị, ị na-ezipụkwa ya. 21 A na-akwanyere ụmụ ya ùgwù, ma ọ naghị ama. Ọ naghị ama mgbe a na-ejighịzi ha kpọrọ ihe.+ 22 Ọ bụ naanị mgbe ọ nọ ndụ ka ihe na-afụ ya ụfụ. Ọ bụ naanị mgbe ọ nọ ndụ ka ọ na-eru uju.”
^ O nwere ike ịbụ, “e mechaa, e gbupụ ya.”